Nezvedu - Dingzhou Toptons Sport Equipment Co., Ltd - Dingzhou Toptons Sport Equipment Co., Ltd.
Tarisa mukugadzira zvigadzirwa zvemitambo
Dingzhou Toptons Sports Chigadzirwa co., Ltd iyo iri mune yemitambo yenyika zvinhu zvigadzirwa kuguta rekumusha ding zhou mitambo yezvinhu indasitiri iye bei province.
Zvigadzirwa & Mechine
Kambani yedu yakavambwa muna2008, inyanzvi yekugadzira dumbbell weights yeiyo yakasanganiswa bhizinesi uye inovhara nharaunda ye100000 mativi emamirimita. Iyo kambani yakagadzika ichikanda machining emagetsi kwakakurudzira stoving varnish otomatiki michina kuti vagadzire imwe yemazuva ano electroplating imwe-yekumira yekugadzira mutsara.
Kambani yedu inonyanya kuburitsa mhando dzese dumbbell barbell uremu uye zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuUnited States Canada Australia Russia Singapore Thailand nedzimwe nyika.
Ding zhou zhong teng subo mitambo yechigadzirwa co., Ltd inosanganisa kutsvagisa uye kuvandudza dhizaini yekugadzira kugadzirwa mukuvandudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.kambani yedu ine hunyanzvi hwekugwinya pfungwa yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Isu neechigadzirwa chemhando yepamusoro nechinangwa Kukwidziridza pfungwa yehutano hwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.Kuwe wega nekushinga kwechokwadi kwazvo sevhisi yakakwana sechivimbiso, shandira nzanga nevamwe vako kubva kumativi ese ehupenyu kubatana maoko mukugadzira ramangwana rine hutano.